Sidee loo Xalliyaa Khilaafka Qoyska?khilaafka lamaanaha – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Sidee loo Xalliyaa Khilaafka Qoyska?khilaafka lamaanaha
Sidee loo Xalliyaa Khilaafka lamaanaha?
mar kasta isku day inaad badbaadisid Guurkaaga!
Inteena ugu badan ayaa qiimeyn ku sameynna haweenkeena iyadoo loo eegayo aragtideena gaarka ah. Waxaan noqon karnaa fal ahaan shucuur ahaan. Ujeedada aragtideena waxay noqon kartaa mid ikhtiyaar ah. Wax walba waxaan ula xiriiri karnaa annaga oo ku saleyna faa iidadayada.
Ka waran noqoshada ujeeddada, taa bedelkeeda? Yaa garanaya? Laga yaabee in naagtaadu ay sax noqon karto. Kee baa naga mid ah oo adeegsanaya qaaciddada sixirka ee loo yaqaan ’empathy’?
Miyaanan u dhaqmi karin annagoo ka fikirna waxyaalaha saygayada / xaaskaaga ka filayo iyo inaan nafteenna gashanno kabahooda? Miyay adagtahay in dhacdooyinka laga eego aragtida saygaaga / xaaskaaga? Waa qaanuunka ujeedo. Isku day. Waad arki doontaa in guurkaaga uu mari doono isbadal weyn.
Waa inaan ku faraxsanaataa guurkaaga!
Haddii aad guursatay, waxaa waajib kugu ah inaad faraxdo oo aad la noolaato saygaaga / xaaskaaga. Ka soo qaad in aad is furteen, ma leedihiin dammaanad aad ku qanacsan tihiin guurkaaga labaad?
Xitaa haddii aad ku faraxday guurkaaga labaad, xusuusta noloshii baaba’day iyo murugada carruurta ka tagtay miyaanay kaa farxin doonin? Ma wajihi kartaa?
Waligaa ha ka fikirin go’aan / allabaryo-hal-dhinac ah. Labadiinnaba waad adkaystaan. Qof kastaa wuu jecel yahay naftiisa ama naftiisa wuxuuna u arkaa inay sax yihiin. Hadday iyadu kuu dulqaadanayn-marwalba waan diidayaa qiimeynta hal-dhinac ah, adiga uma dulqaadan kartid iyada.
Go’aaminta sababaha isku dhaca
Waxaa jira sabab kaliya oo khilaaf ah oo udhaxeysa labada qof ee isqaba: inaadan aqoon sida loo fiicnaado. Waxaan ka buuxinaa maskaxdeenna macluumaad aad u badan oo aan loo baahnayn ilaa aan is guursano. Intooda badan isticmaal ma leh. Hareeraha fiiri. Dad badan oo dhalinyaro ah ayaa guursada kahor intaysan diyaar noqon. Ma haystaan ​​waxbarasho ku filan iyo macluumaad. Sidaas darteed, si sax ah uma maareyn karaan.
Dadka qaar ee leh dhibaatooyinka qoysku waxay qabaan, “waxaan la daalay dhibka xaaskayga”. Weligaa miyaad ka fikirtay sababta ay iyada ugu qayliso? Waxa kaliya ee ay xaaskaagu ku sameyso guriga waa kacsan tahay? Maxaad u arki weyday wajigeeda wanaagsan?
Ka takhalus qaladka weyn
Khaladka ugu weyn ee kuwa dhowaan guursaday ayaa ah inay ka xumaadaan riyada iyagoo ku riyoonaya “beer bisil oo aan qodxanta lahayn” iyo kuwa guursaday sannado badan waa inaysan samayn wax kasta oo ay ku horumariyaan guurkooda iyagoo ka fikiraya, “way sii socon doontaa sidaas oo kale ”.
Ka fikir in uusan jirin bad lahayn mowjad iyo beero aan qod lahayn oo qodxan leh. Marka, waad is degi doontaa. Dhibaatooyin ayaa ka jira meel kasta oo ay dadku ku nool yihiin. Dhibaatada aasaasiga ah waa riyooyinka nolol aan dhibaato lahayn. Waa inaan u diyaar garownaa ka fikirka dhibaatooyinka ay dhici doonaan.
Marka hore, ka fikir inaad khalad sameyn karto!
Marka hore, ka saar khaladaadka aad sameysay. Ninku had iyo jeer wuxuu u malaynayaa in dadka kale qalad yihiin. Si kastaba ha noqotee, waxa ugu fiican ee la sameeyo waa in la isku dayo in marka hore la tirtiro khaladaadkeena.
Waxa muhiimka ahi maahan sida aad tahay laakiin sida xaaskaaga / seygaaga uu adiga ku arko. Laga yaabee inaad jeceshahay saygaaga / xaaskaaga inka badan qofkasta uu jecel yahay laakiin isagu / iyadu ma ogaan karto. Markaa, waa inaad muujisaa inaad jeceshahay isaga / iyada. Waxa qof walbaa jecel yahay wuu ka duwan yahay. Maxay xaaskaaga / seygaagu jeceshahay? Wuxuu jeclaan karaa hadiyado, safar, sheekeysi, daryeel, amaano, ama wax kale. Ma hubtaa inaad isku dayday si ku filan?
Aan kuu sheego sharci wax ku ool ah oo cajaa’ib leh: Ula dhaqan xaaskaaga sida aad jeceshahay in isaga / iyada uu kuula dhaqmo